नेतान्याहूको १२ वर्षे शासन अन्त्यको हुने संघारमा ! – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर नेतान्याहूको १२ वर्षे शासन अन्त्यको हुने संघारमा !
इजरायलमा प्रधानन्त्री बेनजामिन नेतान्याहूको १२ वर्षे शासन अन्त्य हुने देखिएको छ। आइतबार इजरायली संसदले नयाँ सरकार गठनका लागि मतदान गर्दैछ।
मार्च २३ भएको निर्वाचनपछि नेतान्याहूले नयाँ सरकार बनाउन असफल भएका थिए। दुई वर्षमा चारपटक भएको निर्वाचनमा नेतान्याहूले गठबन्धनबाट सरकार टिकाउँदै आएका थिए। तर यसपटकभने विपक्षी गठबन्धनले साथ नदिँदा नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना बढेको हो।
दक्षिणपन्थी यामिना दलका नेता नाफताली बेनेट इजरायलका नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। उनलाई विपक्षी नेता याइर लापिडको सहयोग रहेको छ। नयाँ गठबन्धनमा बनेको सम्झौता अनुसार बेनेटले दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्नेछन्।
नयाँ सरकारमा विभिन्न विचारधारा राख्ने दलहरुको सहभागिता हुने बताइएको छ। सरकारमा इजरायलमा बस्दै आएका प्यालेस्टाइनी नागरिकहरु पनि संलग्न हुन सक्नेछन्। नयाँ सरकारमा प्यालेस्टाइनलाई हर्ने नजरमा मतभेद हुनसक्छ। केही साताअघि इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा गाजापट्टीमा हमासविरुद्ध गरिरहेको हवाई आक्रमण रोकेको थियो। केही विपक्षी दलहरुले नेतान्याहूलाई युद्धविराम गरेको भन्दै असहयोग गर्दै आएका थिए।
नेतान्यताहू शासनको अन्त्य हुने खुशीयालीमा इजरालयका विभिन्न शहरहरुमा र्‍याली निकालिएको छ।